Sardinina Daholo Isika Amin’ny Tsenan’ny Fampialofana Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2016 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Aymara, Ελληνικά, नेपाली, Nederlands, English
Ao Hong Kong, Sardinina isika rehetra. Sary nataon'i Disillusionist (CC BY-ND 4.0)
Malaza amin'ny toe-piainana feno olona sy ny trano fonenana tsara toerana lafo vidy i Hong Kong. Taranaky ny politikan'ny fampialofana maro nifandimby no nampanantenaina amin'ny fanatsarana ny fari-piainana, kanefa mbola eo ampanatontosana izany hatrany. Hita lasa kely sy lafo kokoa ireo trano tao an-drenivohitra tao anatin'ny taompolo maro farany.
Trano toy ny tranom-borona , efitra nosamatsamahana [mg] na nosarahana tamin'ny hazo, sy ny toy izany, no nampiasaina mba ho ala nenina farany ho an'ireo olona mahantra indrindra ao an-drenivohitra. Fa ankehitriny na dia ny trano nozarazaraina aza dia alefa ho an'ny tsena mihaja, satria efa tsy miraika intsony amin'ny tsy rariny ny olona ary efa nanaiky hipetraka amin'ny toerana tery kely amin'ny vidiny lafo.
Na inona na inona karazana trano hipetrahantsika, sardinina avokoa isika rehetra eto Hong Kong .